DVI သို့မဟုတ် HDMI: ကစောင့်ကြည့်ဖို့ပိုကောင်းကြောင်း - HDMI - 2019
ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောအဘို့အ Browser ကို - ကြှနျုပျတို့သညျဤနည်းအားစတာတွေစကားဝှက်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များကိုမှာလော့ဂ်အင်, သွားရောက်ခဲ့ပြီးက်ဘ်ဆိုက်များများ၏သမိုင်း, သိမ်းဆည်းထားရှိရာအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များအရပျဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအောက်ရှိကွန်ပျူတာပေါ်မှာသူသည်လူတစ်ဦး, အလွယ်တကူလူတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် .. အဆိုပါခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ် (လျှင်အော်တိုပြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်) နှငျ့လူမှုကွန်ယက်အတွက်အပြန်အလှန်စာပေးစာယူတက်သတင်းအချက်အလက်, ။
သင် account တစ်ခုပေါ်မှာ password ကိုမထားချင်ကြဘူးဆိုပါကတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစီအစဉ်ကိုပေါ်စကားဝှက်ထားရန်အမြဲဖြစ်နိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, Yandex Browser ကိုအလွန်လွယ်ကူစွာ program ကို-blocker ကို install ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းသောမျှ password ကို setting ကို function ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Yandex Browser ကိုအပေါ်စကားဝှက်တစ်ခုထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အလျင်မြန်ဆုံးလမ်း "နာလန်ထူစံချိန်" ဘရောက်ဇာကိုတစ်ဦးကို browser extension ကို၏ installation ဖြစ်ပါတယ်။ built-in တစ်ခုကို Yandex Browser ကိုသေးသေးလေးအစီအစဉ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမျက်စိ prying ထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ LockPW အတိုင်းဤဖြည့်စွက်အကြောင်းပြောဆိုချင်တယ်။ ရဲ့တပ်ဆင်ရန်နှင့် configure ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါစို့, ဒီတော့ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘရောက်ဇာကိုကာကွယ်ပေးလျက်ရှိသည်။
Google ကဝက်ဘ်စတိုး၏ Yandex ထောက်ခံမှု extension များတပ်ဆင်ထံမှ browser ကိုကတည်းကကျနော်တို့အဲဒီမှာကနေ install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်ဤ extension မှ link တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, "ကိုနှိပ်ပါextension ကို install လုပ်":
အောင်မြင်စွာသင်အဆင့်မြင့်ဆက်တင်နဲ့ tab ကိုဖွင့်လှစ် install လုပ်ပြီးနောက်။
Setup ကိုများနှင့်စစ်ဆင်ရေး LockPW
သင်ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ရင်သူကရိုးရိုးအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ, extension ကို configure လုပ်ထားရမယ်, ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ ဒီနေရာတွင်ကချက်ချင်း extension ကို၏ installation ပြီးနောက် setting နဲ့ပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့ကြည့်ရှုမည်:
ဒီနေရာတွင်ရုပ်ဖျက် mode မှာ extension ကို enable ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤသည်အခြားအသုံးပြုသူကိုရုပ်ဖျက်မုဒ်မှာရှိတဲ့ဘရောက်ဆာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်သော့ခတ်ရှောင်ကွင်းလို့မရဘူးဆိုတာသေချာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမ extensions တွေကိုဒီ mode မှာ run ကြသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သင်ကပစ်လွှတ်လက် LockPW enable လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အသေးစိတျ: Yandex Browser ကို Incognito Mode ကို: က enable နှင့် disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအရာဖြစ်တယ်
ဤတွင်ရုပ်ဖျက်မုဒ်ထဲမှာ extension များပါဝင်သည်ဖို့ screenshots များမှတစ်နေရာလေးကိုလမ်းပြမယ့်:
ဒီ Function ကိုသက်ဝင်ပြီးနောက်, settings ကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်, ထိုသို့ကိုယ်တိုင်မြွက်မှရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် "setting များကို":
ဒါဟာအချိန် setting ကိုပြီးသားဒီလိုကြည့်ရှုမည်:
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့တစ်ခု extension ကိုထူထောင်သလဲ? ကျွန်တော်တို့ကို settings ကိုမှလိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက် setting ရဲ့ကဆင်းရကြစို့:
အလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့ခြင်း - ဘရောက်ဇာကိုမိနစ်အချို့နံပါတ် (user ကသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်) အပြီးပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ function optional ကို, ဒါပေမယ့်အသုံးဝင်သည်,
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကူညီ - အရှိဆုံးဖွယ်ရှိသောကြောင့်သော့ခတ်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာများပြသပါလိမ့်မယ်။ ပိတ်ထားပါသို့မဟုတ်သင့်သမ္မာသတိမှစွန့်ခွာ;
သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဆီက input - ကို browser ၏မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်။ အသုံးဝင်သောသငျသညျစစျဆေးဖို့လိုလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ password ကိုအောက်မှာလျှင်, မသွားဘူး,
quick ကလစ် - အခါသင် CTRL + SHIFT + L ကို browser ကိုသော့ခတ်နှိပ်;
safe mode - function ကိုပြီးစီး LockPW ကွဲပြားခြားနားသော task manager ကိုမှသည်ဖြစ်စဉ်ကာကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်ပါဝင်သည်။ user က browser ၏အခြားမိတ္တူကို run ဖို့ကြိုးစားပါတယ်လျှင် browser ကိုပိတ်ဆို့သောအခါဒါ့အပြင် browser ကိုချက်ချင်းပိတ်ပစ်လိမ့်မည်
အင်ဂျင်ပေါ်, Yandex Browser ကိုတစ်ခုချင်းစီ tab ကိုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီက extension အပါအဝင် Chromium က browser များ, သီးခြားပြေးဖြစ်စဉ်ကိုကြောင်းကိုသတိရပါ။
ရဲ့ login ကြိုးစားမှု၏နံပါတ်ကန့်သတ်ရန် - သုံးစွဲသူကရွေးချယ်ထိရောက်သောမည်သည့်အထက်ကြိုးစားမှု၏နံပါတ်, set: Browser ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် / Clear ကိုသမိုင်း / ပုရုပ်ဖျက်မုဒ်ထဲမှာအသစ်တခုပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်လှစ်။
သငျသညျကိုရုပ်ဖျက်မုဒ်မှာရှိတဲ့ဘရောက်ဆာကိုသက်ဝင်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤ mode မှာချဲ့ထွင်အလုပ်ကို turn off ။
ရွေးချယ်စရာ setting ပြီးနောက်သင်အလိုရှိသော password ကိုအတူတက်လာနိုင်ပါတယ်။ မေ့လျော့မရှိစေရေးအတွက်, သင်ကစကားဝှက်ကိုအရိပ်အမြွက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ချဲ့ထွင်မှု, အခြားစာမျက်နှာများတွင်ဖွင့်လှစ်သင့် browser ရွေးချယ်စရာ သွား. , ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များလုပ်ဆောင်မှလက်ရှိစာမျက်နှာနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ အဲဒါကိုပိတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားပါ, သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းထက်အခြားဘာမှလုပ်သင့်ပါတယ် - browser ကိုချက်ချင်းပိတ်ပစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ LockPW နှင့် cons ဆုံးရှုံးဘူး။ အဖွင့် browser ကို tabs များဖြည့်စွက်တင်ဆောင်ကြသည်အတိုင်း, အခြားအသုံးပြုသူနေဆဲပွင့်လင်းကျန်ရစ်သည့် tab ကိုတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင် browser မှာဒီ setting ကို enable လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီအမှန်:
ဒီချို့တဲ့ပြင်ပေးဖို့, သင်သင့် browser ဖွင့်သည့်အခါ "Scoreboard" ၏ပစ်လွှတ်အပေါ်အထက်ပါ setting များကိုပြောင်းလဲရန်, ဒါမှမဟုတ်ဥပမာ, ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဒီကြားနေ tab ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ browser ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဤတွင် Yandex Browser ကိုသော့ခတ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းကိုသင်မလိုချင်တဲ့အမြင်များမှသင်၏ဘရောက်ဇာကိုကာကှယျပေးနိုငျနှင့်သင့်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: РАЗРУШИТЕЛЬ МИФОВ VGA, DVI, HDMI И РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА (နိုဝင်ဘာလ 2019).